Turkiya & Masar oo ku muransan xadka badda Mediterranean ee 2da dal – Kasmo Newspaper
Turkiya & Masar oo ku muransan xadka badda Mediterranean ee 2da dal
Updated - February 9, 2018 2:38 pm GMT
London (Kasmo), Masar ayaa ku boorrisay Turkiya in ayan ku xadgudbin xuquuqdeeda qarameed ee aagga dhaqaalaha EEZ (Economic Exclusive Zone) bariga Badda Dhexe (Mediterranean Sea), taas oo jawaab u ah war dhowwaan ka soo yeeray Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Mevlut Cavusoglu.
Aagga EEZ waa qayb ka mid ah badda ee ku dhow xadka biyaha Dawladi xaqa qarameed u leedahay maamulka khayraadkiisa dabiiciga ah.
Masar iyo Qubrus ayaa horey u gaaray heshiis kala qeexaya xadka badaha 2da dal, si looga faa’idaysto khayraadka Shidaalka ku jira gunta biyaha ee aagga dhaqaale ee koofurta badda Mediterranean Sea.
War rasmi ah oo Arbacadii, 7dii Febraayo, ka soo baxay afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Axmad Abu Zaid, waxaa lagu caddeeyay in iskuday kasta oo loogu xadgudbayo xuquuqda qarameed aan la aqbali Karin,lagana hortagi doono.
Wuxuu intaas ku daray in dhinacyadu midkoodna ka doodi Karin sharciyadda heshiiska oo, sida uu sheegay, waafaqsan xeerarka Caalamiga ah, isla markaasna Qarammada Miodoobay aqoonsatay.
Ereyada Abu Zaid waxay jawaab u yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiya, Davusoglu, oo Axaddii 4tii Febraayo caddeeyay in Ankara, heshiiskii xadka, sida uu qabo sharciga Caalamiga ah, ka soo qaadayso wax kama jiraan.
Waraysi uu Wasiirku siiyay wargays ka soo baxa Giriigga ‘Khatimerini’ wuxuu ku sheegay in Turkiya, dacwad ku saabsan heshiiskii 2003 ee Masar, Qubrus iyo Giriigga, u gudbisay Qarammada Midoobay, wuxuuna ka digay in aan dal, shirkad iyo maraakiib shisheeye toona loo oggolayn in ay baritaan ruqsad la’aan ah ka sameeyaan aaggaas.
Ereyada Wasiirka waxay ku soo beegmayaan ka dib markii, 31kii Jenaayo,Madaxweynaha Masar, Cabdelfatax Al-Sisi xarigga ka jaray wajigii 1aad ee mashruuca wax soo saarka Gaaska dabiiciga ah ee Zohr.
Xiriirka Masar iyo Turkiaya ayaa dhutinaya tan iyo afgambigii 3dii July 2013 ee Al-Sisi xukunkii uga tuuray Madaxweynihii hore, Maxameed Morsi, kaas oo bahwadaag la ahaa Xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka AKP ee ka taliya Turkiya.